श्रीकृष्णले महाभारतको युद्धका लागि कुरुक्षेत्र नै किन रोजे ? « Mero LifeStyle
यो कुरा त तपाईलाई थाहा नै छ कि, महाभारतको युद्धका बेला भगवान श्रीकृष्णले नै अर्जुनलाई गीताको उपदेश दिएका थिए । तर आज पनि महाभारतको युद्धसँग जोडिएका केही रहस्य छन्, जसको बारेमा धेरै कम मानिसलाई मात्रै थाहा छ । महाभारतको युद्धका लागि श्रीकृष्णले कुरुक्षेत्र नै किन छाने त ? यो धेरैको जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ ।